Mianatra - miverina mianatra
Miaraha mampihatra ny lalana mankany am-pianarana
Makà fitaovam-pianarana mety
Ataovy andro iray manokana ny fisoratana anarana an-tsekoly
Efa akaiky ny fialantsasatry ny fahavaratra, ary ho an'ny ankizy maro dia efa akaiky ny toko iray vaovao mahaliana amin'ny fiainany: manomboka mianatra izy ireo. Raha mihatra amin'ny zanakao izany, dia ho hitanao fa, na dia manantena an'ity indray mitoraka ity aza izy ireo dia matahotra ihany koa izy ireo ao anatiny. Rehefa dinihina tokoa, tsy fantany izay tena antenaina.
Ataovy amin'ny jiro tsara ny sekoly
Raha te hanana fanombohana mahomby amin'ny asan'ny sekoly ianao dia tsy maintsy maka ireo tahotra ireo amin'ny zanakao ary manomana azy ireo tsara amin'ny andro lehibe. Azonao atao ny mahita ny fomba hanaovana an'io eto.
Andro voalohany nianarana - © Holger TK
Avereno jerena ny fiainanao tany am-pianarana: azo antoka fa hisy mpampianatra tsy hainao. Na taranja halanao. Na ahoana na ahoana dia tsy tokony hamindra ny fahatsiarovana ratsy toy izany amin'ny zanakao ianao. Esory kosa ny ahiahiny.
Asehoy hoe tokony ho izy ny sekoly: toerana ianaranao zavatra mampientanentana isan'andro sy hanananao namana vaovao. Raha manatona ilay asa vaovao amin'ny fahatsapana tsara ny zanakao dia ho mora kokoa aminy ny mianatra. Tsara kokoa ny miatrika ny fihemorana mety hitranga na ny zavatra niainana tsy dia tsara loatra rehefa tena nitranga izany.
Tsy ny sekoly ihany, fa koa ny fomba hahatongavana any dia vaovao ary tsy azo antoka ho an'ny zanakao. Noho izany, manaova fanazaran-tena miaraka amin'ireo andro alohan'ny hanombohana fampianarana. Zava-dehibe ny anorisanao ny loza ateraky ny zanakao ary asehoy azy ny fihetsika marina; Mandritra izany fotoana izany, na izany aza, tsy maintsy ampitainao amin'izy ireo fa matoky azy ianao ary afaka mandeha irery izy ireo. Na handeha bus any am-pianarana aza, tokony hanome lalàna azy ianao.
Angataho ihany koa ny zanakao lahy na zanakao vavy momba ny tombana omeny. Ny ankizy dia tsy vitan'ny hoe manana ny fomba fijeriny manokana amin'ny toe-javatra maro noho ny habeny. Tena tokony horaisinao izany.
Ny zava-dehibe indrindra dia mazava ho azy ny satchel. Tokony hampahazo aina azy ny mitafy ary, ambonin'izany rehetra izany, maivana araka izay azo atao. Na izany aza, tsy maintsy manome toerana ampy izy io. Matetika ny zanakao dia mila boky sy boky fanaovana fanatanjahan-tena be dia be, indrindra amin'ny andro mianatra.
Raha miresaka kahie: tsy maintsy hahazo ny sasany aminy koa ianao. Omeo safidinao famolavolana maimaimpoana ny zanakao, fa alao antoka fa ahazoanao vita amin'ny taratasy namboarina. Ny lohahevitra momba ny fiarovana ny tontolo iainana dia miha manandanja kokoa, mba hahafahanao mampiseho ny zanakao fa ny fandraisana anjara kely rehetra dia misy lanjany lehibe.
Tokony hihaino ny mifanentana amin'ny tontolo iainana miaraka amin'ny loko ihany koa ianao. Midika izany fa lafo kokoa ny vidiny, nefa miaro ny zanakao ihany koa amin'ny farany. Ireo plastika voarakitra amin'ny loko mora vidy dia tsy mahasalama.
Mazava ho azy, ny kitapo an-tsekoly feno entana dia tsy tokony ho very amin'ny andro lehibe. Ho mpitsabo maso manokana raha toa ka ataonao miaraka amin'ny zanakao izany. Ho fanampin'ireo vatomamy saika voatery, ny zanakao lahy na zanakao vavy dia tokony hahita fanomezana kely hafa koa ao aminy - kokoa raha jerena mivantana ny sekoly.
Koa satria ny zanakao dia hanao olom-pantatra vaovao amin'ny kilasiny vaovao, dia mety tsara ny boky finamanana. Ny mpiara-mianatra rehetra - ary koa ny mpampianatra - dia afaka mamono ny tenany ao aminy amin'ny mombamomba azy manokana. Ampahatsiahivina lehibe io ho avy eo.
Ny fampianarana dia hetsika lehibe ho an'ny zanakao na izany aza. Asehoy azy fa tsara ho an'ny zanakao ny mianatra any an-tsekoly koa. Makà sary ho fahatsiarovana ary asehoy ny zanakao fa mirehareha aminy ianao. Izy io koa dia manampy amin'ny fiantohana fa manomboka ny asany any am-pianarana tsy misy tahotra sy fahatsapana tsara.
Fiteny manerantany - mifandray ny fianarana fiteny
mpanoratra famoahana mpiasaNavoaka tamin'ny 24. Febroary 2021 15. Jolay 2021 Sokajy Fampianarana, akaninjaza & sekolyKeywords erster Schultag, i-Dötzchen, Schulanfang, Schulänfänger, am-pianarana
indray Lahatsoratra taloha: Mampianatra ny dia | Fialan-tsasatra sy fialan-tsasatra
more Lahatsoratra manaraka: Weltsprachen – Sprachen lernen verbindet